နံရံကပ်လှည့်စက်၊ NC Cutter၊ အပူပေးစက်၊ ရေမှုန်ရေမွှားစိုထိုင်းဆစနစ်၊
ဖေါ်ပြချက်:ကြိတ်စက်ရပ်,တစ်ယောက်တည်း Facer,နှစ်ချက် Facer,ရှုး,အပူပေးစက်,Staker
Home > ထုတ်ကုန်များ > အော်တို Corrugatted ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ
အော်တို Corrugatted ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ကြိတ်စက်ရပ်, တစ်ယောက်တည်း Facer ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, နှစ်ချက် Facer R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Adsorb လူပျို Facer ဖုံးအုပ်ထားပါ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အပြုသဘောကက်ဆက်လူပျို Facer  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြှောင်းပုံ Box ကိုကက်ဆက်လူပျို Facer  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြန်နှုန်းမြင့် Fingerless လူပျို Facer စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Multipassette အပြုသဘောဆောင်သောဖိအားတစ်ခုတည်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကက်ဆက်တစ်ခုတည်း Facer B / E / F ပုလွေစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လက်ချောင်းအမျိုးအစားတစ်ခုတည်း Facer  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်ခုတည်း Facer စက်ကိုစုပ်ယူ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသော Output သည် Fingerless လူပျိုမျက်နှာကိုစုပ်ယူပါ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ် ဦး တည်း Facer စက်ကိုလေဟာနယ်စုပ်ယူ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အဆိုပါကျော်တံတားပေါ်ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကတ်ထူပြားအတွက်အလိုအလျောက် stacker စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
NC စက္ကူဖြတ်စက်ဖြတ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Computerized Slitter Scorer စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နှစ်ဆ Facer ကတ်ထူစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Corrugated Cardboard ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက်ကော်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Corrugated Cardboard ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက်အပူပေးစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြှောင်းပုံကတ်ထူပြားပေါ်တွင် Pre- အပူပေးစက်မျိုးစုံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကဒ်ထူထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်တစ် ဦး တည်း Facer အသုံးပြုခြင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Semi-Automatic Carton Stapling စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Flexo မှင်ပုံနှိပ်ခြင်း Slotting Die ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Adsorb လူပျို Facer ဖုံးအုပ်ထားပါ
Supply နိုင်ခြင်း: 3sets/ month
Adsorb လူပျို Facer ဖုံးအုပ်ထားပါ ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Adsorb Single Facer စက် ကို Corrugated Cardboard Machine လိုင်းနှင့် Automatic Corrugation Machine လိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ဖုံးထားပါ ။...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 20000 / Set/Sets
အပြုသဘောကက်ဆက်လူပျို Facer ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Positive Cassette Single Faceသည် Corrugated Cardboard Machine Line နှင့် Automatic Corrugation Machine လိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာ အနုတ်လက္ခဏာဖိအားအမျိုးအစားဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုနေသည်...
မြှောင်းပုံ Box ကိုကက်ဆက်လူပျို Facer
မြှောင်းပုံ Box ကိုကက်ဆက်လူပျို Facer ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: မြှောင်းပုံထောင့်ကွက် Cassette လူပျို Facer - line.It လူပျို Facer တဦးမျိုးမြှောင်းပုံ Cardboard စက်လိုင်း & အလိုအလျောက်မြှောင်းပုံစက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။...
မြန်နှုန်းမြင့် Fingerless လူပျို Facer စက်
မြန်နှုန်းမြင့် Fingerless လူပျို Facer စက် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: မြန်နှုန်းမြင့် Fingerless တစ်ခုတည်း Facer စက် သည်ပုလွေသွပ်ပြားတစ်ချောင်းကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Single Facer စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Corrugated Cardboard Machine လိုင်းနှင့်...
Multi- ကက်ဆက်အပြုသဘောဖိအားလူပျို Facer ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: ၎င်းသည် Corrugated Cardboard Machine လိုင်းနှင့် Automatic Corrugation Machine လိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် Singer Facer စီးရီးအမျိုးအစားတစ်ခု။ Multi- ကက်ဆက်အပြုသဘောဖိအားလူပျို...
ကက်ဆက်တစ်ခုတည်း Facer B / E / F ပုလွေစက်
ကက်ဆက်တစ်ခုတည်း facer B / E / F ပုလွေစက် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: ကက်ဆက်တစ်ခုတည်း Facer B / E / F ပုလွေစက် - Corrugated Cardboard Machine Line & Automatic Corrugation Machine ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။...
လက်ချောင်းအမျိုးအစားတစ်ခုတည်း Facer ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Fingerless Single Facer သည် Corrugated Cardboard Machine Line နှင့် Automatic Corrugation Machine လိုင်း၏အဓိကစက်ဖြစ်သည်။ လေဟာနယ်စုပ်ယူနိုင်သောမော်ဒယ်တစ်မျိုးတည်းသော Facer...
တစ်ခုတည်း Facer စက်ကိုစုပ်ယူ
တစ်ခုတည်း Facer စက်ကိုစုပ်ယူ Absorb Single Facer စက်သည် Corrugated Cardboard Machine လိုင်းနှင့် Automatic Corrugation Machine လိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစ တစ်ခုတည်း Facer စက် ၏စီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် : Bracket...
မြင့်မားသော Output သည် Fingerless လူပျိုမျက်နှာကိုစုပ်ယူပါ
ထုပ်ပိုး: ပလပ်စတစ် / သစ်သားသေတ္တာများ
မြင့်မားသော Output သည် Fingerless လူပျိုမျက်နှာကိုစုပ်ယူပါ ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: High Output Absorb Fingerless တစ်မျိုးတည်းသော Facer သည် Flute Corrugated Cardboard ကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Single Facer စီးရီးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်...
တစ် ဦး တည်း Facer စက်ကိုလေဟာနယ်စုပ်ယူ
တစ် ဦး တည်း Facer စက်ကိုလေဟာနယ်စုပ်ယူ တစ်ခုတည်း Facer စက်ဖော်ပြချက်: Vacuum Absorb Single Facer စက် သည် ပလတ်စတစ် ပြားတစ်ချောင်းစီကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသော Facer ၏တ ဦး တည်းစီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် Corrugated Cardboard Machine...
အဆိုပါကျော်တံတားပေါ်ကို ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Over Bridge Conveyors၊ Double Layer Bridge Conveyors, Corrugated Board Transport Bridge အားလုံးသည် Hard chrome Plating ကြိတ်စက်၏မျက်နှာပြင်အချင်းအားလုံးဖြစ်သည်။...
ကတ်ထူပြားအတွက်အလိုအလျောက် stacker စက်
ကတ်ထူပြားအတွက်အလိုအလျောက် stacker စက် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Corrugating Production Lines များ အလိုအလျောက် stacker စက် ။ Stacking Equipment သည်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းတွင် package များကိုသယ်ဆောင်ခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။...
NC စက္ကူဖြတ်စက်ဖြတ် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: NC ဖြတ်စက္ကူဖြတ်စက် သုတ်ဆေးကတ်ထူပြား NC ဖြတ်စက်သည် Helical ဓါးဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည် အရည်အသွေးမြင့်သောသံမဏိနှင့်ကွန်ပြူတာစနစ်များကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားသည် ငါတို့သည်လည်းထောက်ပံ့နိုင်: Corrugator Belt: Synthetic...
Computerized Slitter Scorer စက်
Computerized Slitter Scorer စက် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Corrugating Production Lines ၏ Computerised Slitter Scorer Machine သည်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးနှင့်အတူ သွပ်ပြားကိုစုတ်ဖြတ်ပြီးလိုင်းကို...
နှစ်ဆ Facer ကတ်ထူစက်
နှစ်ဆ Facer ကတ်ထူစက် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Double Facer သည်ပြားချပ်ချပ် linerboard ကိုအဓိကကျသောနေရာတွင်အသုံးပြုသည်။ Single Facer ၏နံရံကပ်ပြားများပေါ်တွင်ခိုင်မြဲစွာအသုံးပြုသည်။...
Corrugated Cardboard ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက်ကော်စက်
Corrugated Cardboard ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက်ကော်စက် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Corrugated Cardboard Machine Lines ၏ Glue Machine သည်စျေးကွက်တွင်ဆူညံစွာလည်ပတ်မှု၊...
Corrugated Cardboard ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက်အပူပေးစက်
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 8000 / Set/Sets
Corrugated Cardboard ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက်အပူပေးစက် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: အပူမကပ်မီသေတ္တာများ / ကတ်ထူပြားစက် - ဆလင်ဒါမျက်နှာပြင်ကိုပွတ်တိုက်သည်။ Inverter Motor သည် Corrugating Production Lines အမြန်နှုန်းအရအပူဆလင်ဒါ၏လည်ပတ်မှုကိုထိန်းချုပ်သည်။...
မြှောင်းပုံကတ်ထူပြားပေါ်တွင် Pre- အပူပေးစက်မျိုးစုံ
မြှောင်းပုံကတ်ထူပြားပေါ်တွင် Pre- အပူပေးစက်မျိုးစုံ ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: ကတ်ထူပြား ဖြတ်စက်နှင့်အတူအသုံးပြုသော မြှောင်းပုံကတ်ထူပေါ်တွင် Pre- အပူပေးစက်မျိုးစုံ နှင့်မြှောင်းပုံကတ်ထူပြားလိုင်းများ၏တစ် ဦး တည်း Facer စသည်တို့ကို။...
ကဒ်ထူထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်တစ် ဦး တည်း Facer အသုံးပြုခြင်း
ကဒ်ထူထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်တစ် ဦး တည်း Facer အသုံးပြုခြင်း ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: တစ်ခုတည်းသော Facer ကတ် ထူ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို လည်းနှစ်လွှာ Corrugating Production Lines များဟုလည်းခေါ်သည်။ Single Facer လိုင်းသည်စက္ကူလှိမ့်စက်၊...
Semi-Automatic Carton Stapling စက်
Semi-automatic Stapling စက် ငါတို့သည်လည်းထောက်ပံ့နိုင်: Corrugator Belt: Synthetic Corrugator Belts / မြန်နှုန်းမြင့် Corrugator ခါးပတ်များ / အားဖြည့် Edge လဲမှို့ခါများ / ချည် Canvas သယ်ဆောင်ခါးပတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ Corrugating Rolls: Chrome Plated...
Flexo မှင်ပုံနှိပ်ခြင်း Slotting Die ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: Flexo မှင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ Slotting Die Cutting Machine တွင်အ စာကျွေးခြင်းယူနစ်ပါ ၀ င်သည်။ ငါတို့သည်လည်းထောက်ပံ့နိုင်: Corrugator Belt: Synthetic Corrugator Belts /...
တရုတ်နိုင်ငံ အော်တို Corrugatted ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ ပေးသွင်း
မြှုပ်နှံထားသောကတ်ထူထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည် tile မျဉ်းဖြစ်သည်ဟုရည်ညွှန်းသည်။ သွပ်သေတ္တာထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများ၏အဓိကထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများ၊ မြှောင်းပုံကတ်ထူထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်စိုစွတ်သောပစ္စည်းကိရိယာများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။
ဖြည့်စွက် Corrugator ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Corrugated Cardboard Production Line သည်ကတ်ထူပြား ၃၊ ၅၊ ၇၊
♦ Min မှအမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း: ၁၅၀ မီတာ / မိနစ် - ၃၅၀ မီတာ / မိနစ်
width စက္ကူအကျယ် 1400-2200mm
♦ပုလွေ: A / C / B / E / F / G
သံမဏိပြားများ၊ ကြိုတင်အပူပေးစက်၊ စက္ကူအကြိုအပူပေးစက်၊ တစ်ခုတည်းမျက်နှာ၊ တံတားတပ်ဆင်ထားသောတံတားကြီးများ၊ တံတားပေါ်ဖြတ်ကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်များ၊ မျက်နှာနှစ်ချောင်း၊ စစ်ထိုးစက်များ၊ CNC ဖြတ်များ၊
ကြိတ်စက်ရပ် တစ်ယောက်တည်း Facer နှစ်ချက် Facer ရှုး အပူပေးစက် Staker PBO ကြိတ်စက်အဖုံး စက္ကူစက်လိပ်